StartFAQSomaliWaxan ayaad ku arki kartaa is barbar dhigidda sicirka
Adeeggeennu wuxuu muujinayaa inta lacagta la rabo in la diro dhab ahaan meesheedi ka gaareysa. Waa lacagta aad ka arkeysid meesha cagaaran. Meesha guduudan waxaad ka arkeysaa inta laga goostayoo ahkharashka diridda iyo sarrafka. Ku dhawaad shirkadaha oo dhan lacag khidmo ah ayey ku qaataan in ay lacagta u sarrafaan lacagta waddanka laga qaadanayo. Adeeggeennu wuxuu xitaa muujinayaa inta waqti ah ee ay shirkad walba sheegtay in ay qaadaneyso inta lacagtu ay meeshi loo baahnaa gaareyso. Waxaad liiska natiijada u kala bixin kartaa sida ay lacag diriddu u kala degdeg badantahay iyo sida ay u kala raqiisisantahay.
Magaca shirkad kasta hoostiisa ayaad riixi kartaa darifka ”Mer information”. Halkaas ayaad ka akhrisan kartaa adeegyada kale ee shirkaddu ay ku bixineyso waddanka ay lacagtu ku socoto ee aad dooratay. Halkaas waxaad sidoo kale ka heli kartaa cinwaanka shirkadda ee bogga intarneetka si aad wax dheeraad ah uga akhrisatid. Waqtiga iminka ah fursad uma heysanno in aan aragno haddii kharash dheeraad ah leesaga qaadanayo waddanka lacagta loo dirayo si lacagta loo qaato. Taasna waxaa sidoo kale habboon in aad weydiisid shirkadda. Wax dheeraad ah oo ku aaddan waxan ka akhriso: Ansvar/Avgränsning
Sidan ayaad sameyneysaa si aad lacag u dirtidFaaiidooyinka kannaallada lacagaha lagu dirsado ee rasmiga ahSidee aan si raqiis ah lacag ugu diri karaa?In lacag la diro imisa ayey ku kaceysaa?In akoon la furto/In bangiga qofka la yahay loo caddeeyoHaddii ay wax khaldamaan